Owesilisa uthi wadliswa izidakamizwa wadlwengulwa | News24
Owesilisa uthi wadliswa izidakamizwa wadlwengulwa
Cape Town – Oklebe sebethumele abaphenya ngokushushumbiswa kwabantu eMpumalanga ngemuva kokuba owesilisa waseFree State evuke esibhedlela nodaba olushaqisayo.
Owesilisa ulandise ngokudliswa kwakhe izidakamizwa, wadlwengulwa ngemuva kokuba bethenjiswe isikhala esikoleni sezempilo.
''Yonke le mininingwane ibingakaqinisekiswa okwamanje, kodwa sesithumele ithimba labaphenya ngokushushumbiswa kwabantu ukuba liyobheka elingasiza ngakho,” kusho okhulumela oKlebe uBrigadier Hangwani Mulaudzi.
“Lolu daba okwamanje lusesezingeni lamaphoyisa esiteshini, kodwa abaphenya ngokushushumbiswa kwabantu sebecele ukusiza uma kunesidingo. Asifuni ukulinda ngoba lolu daba lubucayi kakhulu,” kusho uMulaudzi.
Lokhu kungemuva kokuba amaphoyisa aseBushbuckridge evule icala lokuthumba, ukudlwengula nelokushaya, ngalokho akutshelwe ngowesilisa oneminyaka engu-19 ubudala ngesikhathi ephaphama esibhedlela.
Okhulumela amaphoyisa aseMpumalanga uBrigadier Leonard Hlathi uthe owesilisa kanye nodadewabo babone isikhangiso enkundleni yezokuxhumana esifuna abantu abazi kahle izibalo.
Kuthiwa bebefuneka esikoleni esifundisa ezempilo eGoli, ngokwesitatimende sowesilisa.
OLUNYE UDABA: Kuzofundiswa abesifazane ngezindlela zokuzivikela
Kuthiwa bathengelwa amathikithi ebhasi elizobathatha eKroonstad, eFree State, libabeke eGoli, ngenxa yokuthi babengenayo imali yokuzithengela.
''Kuthe uma sebeseGoli, balandwa eJohannesburg Park Station yimoto yohlobo lweBMW X6, emnyama, bayiswa endlini ethile nokuyilapho ‘bafica’ khona abesilisa nabesifazane abasebancane, abangu-24.
'Kuthe kungazelele bajovwa ngento abangayazi, badlwengulwa, bahlukunyezwa,” kusho uHlathi.
Ngesikhathi lona wesilisa ephaphama esibhedlela ngoLwesithathu, utshelwe ukuthi utholakale edindilize eceleni komgwaqo eBushbuckridge, eMpumalanga.
Kufonelwe ubabekazi wakhe othe yena ufonelwe udadewabo wesisulu, omtshele ukuthi usebhanoyini eliya eLagos, eNigeria.
UMulaudzi uthe ngoLwesibili ibingekho imininingwane ebesebeyitholile.